Izindaba - Ukushisa ukushisa kokulawula ukushisa ngesikhathi sokwenza isikhwama
Ukushisa kokushisa kokushisa ngesikhathi sokwenza isikhwama
Enqubeni yokwenziwa kwesikhwama, kwesinye isikhathi ukufaka uphawu kwesikhwama akukuhle kangako. Imikhiqizo ekhiqizwa ngale ndlela ayifanelekile. Yini ebangela lesi simo? Kufanele sinake ukushisa okusika ukushisa
Kuyinto yokungenisa ukulawula ukushisa kokusika ngesikhathi sokwenza isikhwama, uma izinga lokushisa lingafaneleki, isikhwama esiphelile ngeke sifaneleke.
Okokuqala, qiniseka ukuthi yiluphi ulwazi esilusebenzisayo. Izinto ezifanayo ukujiya okuhlukile ububanzi obuhlukile ubude obuhlukile, kudinga ukushisa okuhlukile. Hlola izikhwama eziningana ekuqaleni komshini osebenzayo ukuthola izinga lokushisa elifanele
Okwesibili, izinto ezihlukile zidinga ukushisa okuhlukile.
Izinga lokushisa elisika linquma ikhwalithi yesikhwama, uma izinga lokushisa liphezulu kakhulu, izinto ziyoncibilika, onqenqemeni hhayi oluyisicaba futhi impahla izonamathela, khona-ke kuzoba yisikhwama semfucuza, uma izinga lokushisa liphansi kakhulu, alikwazi ukusika isikhwama ngokuphelele, futhi lizotheleleka isikhwama esilandelayo.
Futhi, lapho isivinini somshini sihamba ngokushesha, izinga lokushisa nalo lidinga ukukhuphuka, lapho isivinini sehla, izinga lokushisa nalo lidinga ukwehla ngokufanele
Sidinga ukuhlanza umsiki wokushisa njalo ngemuva kokucishwa komshini, ngemuva kokusebenza isikhashana, kuzoba nothuli kusiki, uma singalihlanza, uthuli lungadlulisela esikhwameni.
Futhi, sidinga isimo se-cutter cutter, ngemuva kokusika ukushisa okusebenza isikhashana, kufanele sikubuyisele okusha, ngemuva kokusika okusebenzise isikhathi esithile, ngeke kubukhali kangako.
Ngakho-ke uma sikwazi ukulawula ukushisa kokushisa okushisa kahle ngesikhathi sokwenza isikhwama, kungakhuphula umthamo wokukhiqiza, kunciphise imfucuza yesikhwama, ngakho-ke singanciphisa izindleko.